Jingzheng Beijing International Expo on Ime nwa na ngwaahịa nwa & agụmakwụkwọ na ihe ụmụaka ji egwuri egwu ga-eme na Beijing - China International Exhibition Center
Jingzheng Beijing International Expo na Ime ụmụaka na Ngwaahịa & Mmụta na Toy ụdị ụbọchị mbipụta ọzọ emelitere
Jingzheng Beijing International Expo na Ime ụmụaka na Ngwaahịa & Mmụta na ụdị egwuregwu
At Beijing - China International Exhibition Center 6 N 3rd mgbanaka Rd E, Chaoyang Qu, Beijing Shi, China, 100096 Categories: Baby, Kidsmụaka & Isi Tags: Nwa & umuaka, Ime Ngwaahịa Baby, Nri anụ, Nwa Album, Baby Nri onunu, Ngwaahịa Ahụike Ahụ, Ngwa nchekwa ụmụaka
Iji meziwanye ihe ngosi ahụ, ndị na-ahazi emeela ihe ọhụrụ n'ụzọ ngosi na ihe ngosi, wepụta ọtụtụ ọrụ dị ịtụnanya na saịtị, ngosipụta ọhụụ, mmakọ ị nweta, otu ngosi mba ụwa, nchịkọta igwe na ihe ọma ndị ọzọ. ọrụ, iji melite ogo ọrụ nke ikpo okwu; Childrenmụaka na-arụ ọrụ nka na mmemme mmekọrịta, na-egosi mmụba dị mma nke mmụọ nke okooko osisi nna, na-eme ka ọnọdụ ọdịbendị nke expo dịkwuo mma.
Mgbe ihe karịrị afọ iri nke mmepe na uto, "jingzheng · ime, nwa ọhụrụ na nwa ngosi" aghọwo n'ime a mba ọkachamara ngosi, ahia na mgbanwe n'elu ikpo okwu na-enwe mmetụta dị ukwuu na ime, nwa ọhụrụ na ụlọ ọrụ ụmụaka. Site na ọtụtụ narị puku ngwaahịa sitere n'akụkụ ụwa niile, na-ekpuchi teknụzụ na ọrụ ọhụụ site n'akụkụ ụwa niile, ọ bụ ihe ga-ahụrịrị maka ndị otu ụlọ ọrụ ọ bụla. N'ebe a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịchọta ihe niile ịchọrọ.
Ngwaahịa ụmụaka dị ime na Beijing ga-egosipụta ngwaahịa na ọrụ metụtara ndị na-emepụta ngwaahịa nne na nwa, ụdị, ikike, na ọrụ nne na ụmụaka.
Ngụkọta nke ebe ngosi ahụ bụ mita 110,000, na-ekpuchi ụlọ ngosi ihe ngosi nke mba China dum
E nwere ihe dị ka ndị ngosi ngosi 1,200
Enwere ndị nrụpụta amaara ama na ụlọ 2,104, ndị nwe akara na ngwaahịa nne na nna na nne;
E nwere 77125 anụ ụlọ na ndị si mba ọzọ ama ngwaahịa niile abuana
N'ime ha, e nwere ndị otu ndị ọkachamara na-azụ ahịa 37 na ndị mmadụ 4,936, ndị ọkachamara na ndị ọzọ na-azụ ikike ịzụta ihe na-abịa ihe ngosi ahụ ịchọ ngwaahịa ọhụrụ na ọrụ ntinye ego.
Nri nri, nhicha na ngwaahịa disinfection, ngwaahịa nlekọta anụ ahụ, nlekọta ahụike, ngwaahịa electronic, nchekwa nchekwa, wdg
Enwere ike kewaa ngwaahịa nne na nwa n'ime edemede: ngwaahịa nne (pad, mmiri ara, ngwaahịa nlekọta ahụike, mgbake nwa)
Ngwaahịa, post-natal arọ ọnwụ, wdg.. Nlekọta ngwaahịa (nwa omo, uwe softener, moisturizer / ude mmiri / mmanụ, hip nchedo)
Ude, aka / ọnụ / anụ ehichapụ, ncha ụmụaka, ncha ntutu, ịsa ahụ, ogbo bat, tub, wdg.
Isiokwu (akwa akwa, akwa aka, pad pad, pad, karama na ngwaahịa ndị ọzọ).
Mmụta na ihe ncheta (ihe ụmụaka eji egwuri egwu, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ụlọ egwuregwu, ihe agụmakwụkwọ na agụmakwụkwọ, ihe ncheta, wdg).